उपकुलपतिले घुस लिए, भतिजाले राखे - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं, असार २८ । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारले बिहीबार घुसबापत आठ लाख रुपैयाँ आफैले बुझेका थिए । उनले पैसा बुझेपछि भतिजा डा. रामहरि रौनियारलाई बोलाए । मेडिकल अफिसरको रुपमा कार्यरत डा. रामहरि पैसा लिएर निवासतर्फ गए । उनी करिब साढे चारबजेतिर पैसा निवासमा राखेर पुनः बुलेट बाइक चढेर उपकुलपति कार्यालय प्रवेश गरेका थिए । लगत्तै अख्तियारको टोलीले छापा मारेको थियो ।
अख्तियार टोलीले पक्राउ गरेर लगेपछि डा। रामहरिको बुलेट बाइक शुक्रबार पनि उपकुलपति कार्यालयअघि बेवारिसे अवस्थामा छ । काका उपकुलपति भएपछि प्रतिष्ठानमा उनको अनावश्यक सक्रियता र हस्तक्षेप बढेको भन्दै चर्चा र असन्तुष्टि व्याप्त थियो । प्रतिष्ठानमा थुप्रै भौतिक संरचनाहरु निर्माणाधिन छन् । प्रतिष्ठानको भवन निर्माण तथा मेसिन खरिदका बेला करोडौँ घोटाला हुने गरेको छ । यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
ट्याग्स: Dr . rajkumar rauniyar